Tallaallada COVID-19 ee WA - Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington - Faa'iidada Medicare
KU SOO DHAWAADA
* TAARIIKH SI LOO Ballaariyo *
Adeegga Macaamiisha: 1-800-942-0247
TTY Relay: Garaac 711
A Yaree cabirka farta. A Dib u deji cabirka farta. A Kordhi cabirka farta
Dhamaan Qorshayaasha Medicare ee 2022
2022 MA Qorshaha Labada ah (HMO SNP)
2022 MA Qorshaha 1 (HMO)
2022 MA Qorshaha 2 (HMO)
2022 MA Qorshaha 3 (HMO)
2022 MA Qorshaha 4 (HMO)
2022 MA Qorshaha Rx (HMO)
Dhamaan Qorshayaasha Medicare ee 2021
2021 MA Qorshaha Labada ah (HMO SNP)
2021 MA Qorshaha 1 (HMO)
2021 MA Qorshaha 2 (HMO)
2021 MA Qorshaha 3 (HMO)
2021 MA Qorshaha 4 (HMO)
2021 MA Qorshaha Rx (HMO)
Khariidada daboolida/wakiilada maxaliga ah
Isbarbar dhig Qorshayaasha 2022
Isbarbar dhig Qorshayaasha 2021
Xarunta Xarunta Xubinta
Daabac Kaarka Aqoonsiga
Daryeelka Caafimaadka Qabiilka
Barnaamijka Tayaynta Tayada
Khiyaano, Qashin, iyo Xadgudub
Dawooyinka loo qoro
Daryeelka Virtual CHPW
Cunnada Sii-deynta Kadib
Daaweynta Jirka, Shaqada, iyo Hadalka
Cadaadis Dhiig oo Sarreeya
Qorshaha Labada Dhinac ee CHPW
Xubnaha Su'aalaha la Weydiiyo
Hoyga Xarunta Bixiyaha
Caafimaadka Jirka PA
Daaweyn Si Xirfad Leh Loo Maamulay
Oggolaanshaha Hore ee Su'aalaha
MA Heliyaha Takhasuska leh
Khadadka Caawinta Dhibaatada
Bogga ugu weyn > Tilmaamaha Guriga > Tallaallada COVID-19 ee WA
Tallaallada COVID-19 ee WA
Ka hel ilo iyo macluumaad ku saabsan tallaallada COVID-19 ee gobolka Washington.
Waa maxay sababta Faa'iidada Medicare ee CHPW?
Baadh daryeelkaaga iyo bulshadaada.
Raac balooggeena cusub wixii ugu dambeeyay ee caafimaadka & fayoobaanta ee laga helo CHPW iyo hoggaamiyeyaasha caafimaadka maxalliga ah.
La dhejiyay Janaayo 4, 2021 in Tilmaamaha Guriga	by chpadmin
Maxaad u Baahan Tahay Inaad Ogaato
Talaalka COVID-19 ayaa ah habka ugu wanaagsan ee adiga, ehelkaaga, iyo bulshadeena loo badbaadin karo. Guji ama rog si aad u hesho macluumaad ku saabsan:
Yaa ah inuu qaato tallaalka | Sida loo helo tallaalkaaga | Nolosha tallaalka kadib | Su'aalaha Badiya La Weydiiyo
Cusboonaysiinta ugu dambeysay ayaa lagu daray 10.01.21:
Tallaalada xoojiya waxaa heli kara oo keliya kuwa qaata tallaalka Pfizer-BioNTech oo dhammaystiray taxaddarradoodii ugu horreeyey ugu yaraan 6 bilood ka hor OO ku jira mid ka mid ah dadka soo socda: 65 sano iyo ka weyn, 18 iyo ka weyn oo qaba xaalado caafimaad oo hoose, ama 18 iyo ka weyn oo ku nool ama ka shaqeeya goobaha halista badan. Si aad u ogaato inaad xaq u leedahay, fadlan weydii dhakhtarkaaga iyo/ama wax badan ka baro Websaydhka CDC.
Hadda u baahan caddeyn tallaalka COVID si loogu galo hawlaha iyo dhacdooyinka (tusaale, makhaayadaha, ciyaaraha kubbadda cagta) King, Jefferson, iyo Clallam gobollada, iyo sidoo kale inta badan daawadeyaasha iyo dhacdooyinka isboortiga ee WA. Sidoo kale eeg: Maxaa loo tixgeliyaa caddaynta tallaalka COVID-19 ee ku qoran warqadda WA, oo ay samaysay Waaxda Caafimaadka WA.
Yaa ah inuu qaato tallaalka COVID-19?
Dhammaan dadka deggan Washington ee da'doodu tahay 12 ama ka weyn ayaa xaq u leh tallaalka, iyadoon loo eegin xaaladda socdaalka ama xaaladda caymiska caafimaadka. Tallaalku waa BILAASH $ 0.
Dadka waaweyn 65 iyo ka weyn
Dhammaan dadka deggan Washington ee jira 18 iyo ka weyn ayaa u -qalma tallaalka, iyadoon loo eegin xaaladda socdaalka ama xaaladda caymiska caafimaadka.
Khatarta jirro daran oo ka timaadda COVID-19 ayaa sii kordheysa da'da. Tani waa sababta CDC waxay ku talineysaa dadka waaweyn ee 65 sano iyo ka weyn inay qaataan tallaalada COVID-19.
Dadka jira 18 iyo ka weyn waxay xaq u leeyihiin tallaalada Pfizer, Moderna, iyo Johnson & Johnson (J&J). Tallaallada Moderna iyo Pfizer waxay u baahan yihiin laba qiyaasood si ay u helaan difaac buuxa; tallaalka Johnson & Johnson (J&J) wuxuu u baahan yahay hal qiyaas.
Tallaalka saddexaad ee tallaalka COVID-19 ayaa hadda lagula taliyaa oo keliya dadka qaba hab-dhiska difaaca ee sida weyn u liita, sida kuwa qaata daaweynta kansarka ama xubin-ku-beddelidda xubnaha. Eeg Su'aalaha Inta Badan La Isweydiiyo hoosta si aad u heshid tilmaamo ku saabsan tallaalka iyo xaaladaha sida habdhiska difaaca oo daciifay ama hoos u dhacay iyo xaalado kale oo gaar ah.
Hel meesha tallaalka.
Eeg macluumaadka COVID-19 ee dadka waaweyn oo ay soo ururisay AARP ➜
Dadka Waaweyn 18-64
Da'da Dhalinyarada 12-17
Dhallinyarada da'doodu u dhaxayso 12-17 waxay xaq u leeyihiin inay qaataan tallaalka Pfizer*
Helitaanka tallaalka dhallinyarada da'doodu u dhaxayso 12 ilaa 17 ayaa muhiim u ah qoysaska iyo bulshooyinka. Xaqiiji in qof kasta oo qoyskaaga ka mid ah uu caafimaad ku sugnaan karo, ku sii jiri karo fasalka, si ammaan ah ula qaadan karo saaxiibbada, kana qayb qaadan karo waxqabadyada ay jecel yihiin.
Eeg waxa waalidiinta carruurta yar yar ay tahay inay ka ogaadaan tallaalada COVID-19 ➜
Wax ka baro tallaalka dhalinyarada dhakhaatiirta deegaanka ➜
Baro waxa ay dhallinta xaafaddu ka leeyihiin tallaalka ➜
*Xusuusin: Marka aad ballan u sameysato qof 12 ilaa 17, hubi meesha aad dooratay inay maamusho Pfizer tallaalka, oo ah tallaalka kaliya ee hadda loo oggol yahay dadka da'daas ah. Oggolaanshaha waalidka ama mas'uulka ayaa loo baahan yahay.
Dadka uu ku dhacay caabuqa COVID-19 hore
Haa, waa inaad is tallaalaa xataa haddii aad hore u lahayd COVID-19 maxaa yeelay:
Cilmi-baaristu weli ma muujin inta lagaa ilaalinayo inaad mar kale qaaddo COVID-19 kadib markaad ka bogsato COVID-19.
Tallaalku wuxuu kaa caawinayaa inuu ku difaaco xitaa haddii aad hore u lahayd COVID-19.
Baadhitaannada qaarkood waxay tilmaamayaan in dadka aan la tallaalin ee hore u haystay COVID-19 ay in ka badan 2 jeer ka badan yihiin kuwa si buuxda u tallaalay si ay mar kale u helaan COVID-19.
Ka warran dadka leh tixgelinno gaar ah, xaalado caafimaad, ama arrimo halis ah?
Haddii aadan hubin haddii tallaalka COVID-19 adiga kugu habboon yahay, wac dhakhtarkaaga, kalkaalisada, ama rugta caafimaadka.
Eeg Su'aalaha Inta Badan La Isweydiiyo hoosta si aad u heshid tilmaamo ku saabsan tallaalka iyo xaaladaha sida uurka, habdhiska difaaca oo daciifay ama hoos u dhacay, iyo xaalado kale oo gaar ah.
Sideen ku heli karaa tallaalka COVID-19?
Tallaalka COVID-19 waxaa lagu bixiyaa lacag la'aan waxaana laga heli karaa meelo badan oo ka tirsan Gobolka Washington. Kaalmo ayaa sidoo kale la heli karaa haddii aad qabtid su'aalo ama aad u baahan tahay in lagaa caawiyo helidda ballan.
Hel meel kuu dhow:
Online: Eeg helitaanka ballanta waqtiga-dhabta ah iyo faahfaahinta jadwalka. Waxaa lagu heli karaa in ka badan 30 luqadood.
Telefoonka: call 1-833-VAX-CAAWIMAAD (1-833-829-4357), ka dibna taabo #.
Qoraal ahaan: qoraal nambarkaaga ugu dir 438-829 (GET VAX) ama 822-862 (VACUNA)
Call 1-833-VAX-CAAWIMAAD (1-833-829-4357), ka dibna riix # si:
Ka caawi jadwalka ballanta
Luuqad caawinta dadka aan ku hadlin Ingiriisiga
Ma safri karo? Haddii adiga ama qof aad taqaanid uu yahay mid guriga ka baxa oo aan awoodin inuu u safro goob tallaal, waxaad ku heli kartaan tallaal gurigaaga. Si aad u codsato tallaalka guriga ku salaysan, soo gudbi foomka tallaalka guriga ku salaysan ku socota Waaxda Caafimaadka ee Gobolka Washington. Haddii aad qabtid su'aalo, iimayl u dir [emailka waa la ilaaliyay].
Waan qaatay tallaalka. Hadda maxaa?
Guji jawaabaha su'aalaha caadiga ah ee ku saabsan nolosha tallaalka ka dib Gobolka Washington.
Waxa la filayo tallaalka kadib
Ka dib markaad hesho tallaalka COVID-19, waxaa laga yaabaa inaad dareento falcelinno ay ka mid yihiin daal, lallabo, madax-xanuun, muruqyo xanuun, qarqaryo, iyo qandho. Kuwani waxay dareemi karaan wax aan fiicnayn, laakiin waxay calaamad u yihiin in tallaalku jirkaaga baranayo sida la isaga ilaaliyo COVID-19. Calaamadahaasi waa inay ku baxaan maalmo yar gudahood.
Baro wax badan oo ku saabsan waxyeellooyinka ka imaan kara CDC ➜
Waxaa laga yaabaa inaad maqashay in tallaalka Johnson & Johnson/Janssen (J&J) la joojiyay 11 maalmood Abriil 2021 sababo la xiriira warbixinno dhif ah, laakiin saameyn daran. Sida laga soo xigtay CDC, saameyntan waxay ku dhacdaa qiyaas ahaan 7 halkii 1 milyan oo haween ah oo la tallaalay inta u dhaxaysa 18 iyo 49 sano jir, dhacdadan xunna waxay aad ugu yar tahay dumarka 50 sano iyo ka weyn iyo ragga da 'kasta leh. CDC waxay ku talisay in dib loo bilaabo isticmaalka tallaalka J&J, laga bilaabo Abriil 23, 2021.
Miyaan “si buuxda u tallaalay”?
Waxaa laguu tixgelinayaa inaad si buuxda u tallaashay COVID-19 laba toddobaad ka dib markii aad qaadatay tallaalkaaga labaad haddii ay tahay inaad qaadato laba qiyaasood (Pfizer BioNTech ama Moderna), ama laba toddobaad ka dib markaad qaadato tallaalka Johnson & Johnson (J&J).
Haddii aadan buuxin shuruudahan, MA si buuxda loo tallaalay. Dadka aan si buuxda loo tallaalin, oo ay ku jiraan carruurta ka weyn 2 sano, waa inay sii wadaan inay xirtaan maaskaro goobaha dadweynaha. COVID-19 ayaa weli ku sii fidi kara dadka aan la tallaalin oo qayb ahaan la tallaalo.
Dadyowga qaarkood, CDC waxay hadda ku talineysaa in la siiyo qiyaas saddexaad ama tallaal xoojin ah — eeg “Miyaan u baahan doonaa xoojin ama tallaal dheeraad ah si aan u badbaado”? xog hoose.
Miyaan u baahan doonaa xoojin ama tallaal dheeraad ah si aan u badbaado ”?
A xabbad saddexaad tallaalka COVID-19 ayaa hadda la heli karaa oo keliya loogu talagalay dadka qaata tallaalka Moderna ama Pfizer-BioNTech oo leh hab -dhiska difaaca oo si weyn hoos ugu dhacay, sida kuwa qaata daawaynta kansarka ama xubin -ku -tallaalid. Dadka dhexdhexaadka u ah tallaalka si aad u daran marmarka qaarkood ma dhisaan difaac ku filan (ama mid kasta) marka ugu horreysa ee ay qaataan tallaalka, xogta ayaa muujisay in qiyaasta tallaalka Moderna ama Pfizer saddexaad ay gacan ka geysaneyso kordhinta waxtarka tallaalka ee kooxdan.
A tallaalka xoojiyaha hadda waa la heli karaa oo keliya qaatayaasha tallaalka Pfizer-BioNTech oo dhammaystiray taxaddarradooda bilowga ah ugu yaraan 6 bilood ka hor OO ku jira mid ka mid ah dadka soo socda: 65 sano iyo ka weyn, 18 iyo ka weyn oo qaba xaalado caafimaad oo hoose, ama 18 iyo ka weyn oo ku nool ama ka shaqeeya meel sare -dajinta degdegga ah. Si aad u ogaato inaad xaq u leedahay, fadlan weydii dhakhtarkaaga iyo/ama wax badan ka baro Websaydhka CDC.
Miyaan weli u baahanahay inaan xirto maaskaro?
Haa. Dadka la tallaalay, qayb ahaan la tallaaley, iyo kuwa aan la tallaalin ee ka weyn shan sano jir ayaa laga rabaa xiro maaskaro/dabool inta badan goobaha gudaha ee dadweynaha, dhaqan galaysa Ogosto 23. 2021.
Maaskaradu waa loo baahan yahay inta badan goobaha gudaha ee dadweynaha, tusaale ahaan:
Maaskaradu waa si xoog leh ayaa lagula talinayaa meelaha bannaanka ah ee dadku ku badan yihiin oo fogeynta jireed aysan suurtogal ahayn, tusaale ahaan:
Waa maxay caddaynta tallaalka? Ma u baahanahay?
Caddaynta tallaalka COVID-19 ayaa laga yaabaa in loo baahdo gelitaanka meheradaha ama dhacdooyinka. Nooca caddaynta la aqbali karo ee tallaalka wuu ku kala duwanaan karaa goobta, laakiin kuwa soo socda ayaa tusaale u ah waxa guud ahaan laga aqbalo Gobolka Washington:
Kaarka Tallaalka ee CDC COVID-19-asalka, koobiga, ama sawirka aaladda moobaylka
Shahaadada Tallaalka COVID-19 ama QR Digital Code ka MyIR Mobile
Foomka Xaaladda Shahaadada Tallaalka oo laga daabacay Nidaamka Macluumaadka Tallaalka ee Gobolka Washington
Daabacaada diiwaanka caafimaadka elektaroonigga ah ee la xaqiijiyay oo ka yimid bixiye caafimaad
Eeg shuruudaha iyo tilmaamaha:
Degmooyinka Jefferson iyo Clallam
Daawadaha iyo dhacdooyinka isboortiga ee WA
Wali ma heli karaa COVID-19? Ma inaan is baaro?
Haa. Waa wax aan caadi ahayn in shaqsiyaadka si buuxda loo tallaaley ay u bukoodaan COVID-19 maxaa yeelay tallaalladu aad bay waxtar u leeyihiin. Si kastaba ha ahaatee, mar haddii mid ka mid ah tallaaladu aysan 100% wax ku ool ahayn, qayb yar oo dadka la tallaalay ayaa weli laga yaabaa inay qaadaan COVID-19. Laga bilaabo Abriil 2021, horumarka tallaalku wuxuu ka dhacay qiyaastii 0.01 boqolkiiba dadka Washington oo si buuxda loo tallaalay.
Waa inaad is baartid haddii aad la kulantay COVID-19 ama aad isku aragto astaamo. Wax dheeri ah baro oo ka hel meesha Baaritaanka COVID-19 oo kuu dhow.
Ma safri karaa?
Raac CDC -ga hadda iyo waaxda caafimaadka talooyinka safarka.
Nolosha Tallaalka Kadib Su'aalaha la isweydiiyo➔
COVID-19 Tallaalka Su'aalaha Badanaa La Isweydiiyo
Guji hoosta si aad u hesho jawaabaha su'aalaha caadiga ah ee ku saabsan tallaallada COVID-19 ee Gobolka Washington. Waxaad sidoo kale daawan kartaa fiidiyaha hoose si aad u maqasho khubarada maxalliga ah oo ka jawaabaya su'aalaha oo wax ka qabta ismaandhaafka guud ee ku saabsan tallaallada COVID-19 (oo la duubay Maarso 2021; sidoo kale waa la heli karaa En Español).
Badbaadada iyo waxtarka
Talaaladu ma nabdoon yihiin?
Su’aal kama taagna in tallaallada COVID-19 ay yihiin kuwo ammaan ah oo waxtar leh. Malaayiin qof oo ku nool Mareykanka ayaa la helay tallaal.
Teknoolojiyadda loo isticmaalay in lagu soo saaro labadii tallaal ee ugu horreeyay ee COVID-19 ee loo oggolaaday in loogu isticmaalo Mareykanka, laga bilaabo Moderna iyo Pfizer, ma ahan wax cusub. Waxaa la darsay oo loo adeegsaday tobanaan sano cilmi baaris kale oo caafimaad.
Waa run in tallaalada COVID loo sameeyay si ka dhaqso badan talaalada kale waqtiyadii hore. Laakiin waxaa si taxaddar leh loogu tijaabiyey tijaabooyin caafimaad oo ku lug leh tobanaan kun oo qof. Ma jirin wax walaac ah oo xagga nabadgelyada ah. Natiijooyinka baaritaanka waxaa dib u eegay oo oggolaaday dhowr guddi madax-bannaan oo khubaro ah.
Dhammaan saddexda tallaal waxay la kulmeen FDA si adag, heerarka sayniska ee oggolaanshaha isticmaalka degdegga ah si loola dagaallamo masiibada COVID-19.
Intaa waxaa dheer, Tallaalka Pfizer si rasmi ah ayaa FDA loo oggolaaday.
Badbaadinta tallaalka COVID-19 ayaa ah mudnaanta koowaad ee gobolka iyo federaalka dawladda, iyo warbixinnada dhibaatooyinka caafimaad ee ka dambeeya tallaalka COVID-19 aad baa loo qaataa. Ogaanshaha waxyeellooyinkaan dhifka ah waxay noo sheegaysaa in nidaamyada meesha yaal si loola socdo badbaadada tallaaladan ay shaqeynayaan. Warbixinnada dhibka dhifka ah, laakiin halista ah ee xinjirowga dhiigga oo leh xinjiro hoose ayaa goor hore la ogaaday, joogsiguna wuxuu ka tarjumayay sida ay dawladda gobolka iyo dowladda federaalku uga go'an tahay daahfurnaanta iyo amniga iyadoo CDC iyo FDA ay soo ururiyeen oo ay dib u eegeen xog dheeri ah. Tallaallada COVID-19 ayaa la soo maray waxayna sii wadi doonaan inay maraan kormeerka amniga ugu xooggan taariikhda Maraykanka.
Tallaaladu waxtar ma leeyihiin?
Tijaabooyinka caafimaadku waxay muujiyeen in dhammaan tallaallada COVID-19 ee hadda laga heli karo Mareykanka ay waxtar u leeyihiin ka hortagga COVID-19. Intaa waxaa sii dheer, cilmi-baarista socota waxay bixisaa caddeyn sii kordheysa oo ah in tallaallada mRNA COVID-19 ay bixiyaan ilaalin la mid ah xaaladaha dhabta ah ee adduunka.
Eeg faahfaahinta ku saabsan waxa cilmi -baaristu nooga sheekeyneyso waxtarka tallaallada COVID
Sidee bulshooyinka midabka leh u aamini karaan tallaaladan?
Tallaallada COVID-19 waxaa lagu tijaabiyay tijaabooyin caafimaad oo ku lug leh tobanaan kun oo mutadawiciin ah oo ka kala socda dhammaan jinsiyadaha iyo qowmiyadaha.
Tijaabooyinka, tallaalku wuxuu ka ilaaliyay dadka waaweyn jinsiyadaha, jinsiyadaha, iyo da 'kasta oo fayraska ah.
Waxa ay tahay in dadka midabka leh ay ka ogaadaan tallaallada COVID-19, Sherita Golden, MD, MHS, madaxweyne ku xigeenka iyo madaxa sarkaalka kala duwanaanshaha ee Johns Hopkins Medicine
Booqo Ku Biir Wadahadalka si aad u maqasho dhakhaatiirta, kalkaaliyayaasha, iyo shaqaalaha caafimaadka bulshada ee u aqoonsada dadka midabka leh.
EthnoMed ee Xarunta Caafimaadka Harborview waxay kaloo soo uruurisay a tusaha ilaha lagu heli karo luuqadaha aan Ingiriisiga ahayn.
Badbaadso Qoyskaaga - Ka tallaal COVID-19
Proteja a su familia Vacúnese contra la COVID-19
Ilaali Qoyskaaga Iska tallaal COVID-19
➔ qoysaskaọn sugaan ee Kufsiga -19 tallaabada yar qaadashada
保护 您 的 家人 - ​​接种 新 冠 19 疫苗
Ả Bảo vệ Gia đình Quý vị Chủng ngừa COVID-19
Miyaan waligay u baahnaan doonaa inaan iska baaro COVID mar kale?
Haa, haddii aad la kulantay COVID-19 ama aad isku aragto astaamo. Waa wax aan caadi ahayn in shaqsiyaadka si buuxda loo tallaaley ay u bukoodaan COVID-19 maxaa yeelay tallaalladu aad bay waxtar u leeyihiin. Si kastaba ha ahaatee, mar haddii mid ka mid ah tallaaladu aysan 100% wax ku ool ahayn, qayb yar oo dadka la tallaalay ayaa weli laga yaabaa inay qaadaan COVID-19. Laga bilaabo Abriil 2021, horumarka tallaalku wuxuu ka dhacay qiyaastii 0.01 boqolkiiba dadka Washington oo si buuxda loo tallaalay.
Haddii aad la kulantay COVID-19 ama aad isku aragto astaamo, hel goob tijaabinta COVID-19 oo kuu dhow.
Waa maxay kiisaska horumarku? Maxay la odhan ah Delta macnaheedu?
Kiis horumar leh ayaa dhacaya marka qof si buuxda loo tallaalay uu ku dhaco cudurka coronavirus. Qof si buuxda loo tallaaley oo cudurka qaadsiiyaa wuu xanuunsan karaa wuxuuna ku faafi karaa coronavirus dadka kale.
Kala duwanaanshaha Delta waa culeys sababa caabuqyo badan isla markaana ku faafa si ka dhakhso badan qaababkii hore ee SARS-CoV-2 (COVID-19/coronavirus). Kala duwanaanshaha Delta waa mid aad u faafa, xogta qaarna waxay soo jeedineysaa inay sababi karto jirro ka daran tii hore ee dadka aan la tallaalin.
Talaalka COVID-19 ayaa ah habka ugu wanaagsan ee adiga, ehelkaaga, iyo bulshadeena loo badbaadin karo.
➔ Booqo CDC si aad u ogaato wax badan oo ku saabsan horumarka iyo kala duwanaanshaha
➔ Akhri maqaalkan Yale Medicine oo sharxaya sababta tallaalku u yahay habka ugu wanaagsan ee looga hortago caabuqa iyo gudbinta
Tallaalku miyuu ilaaliyaa nolosha oo dhan, mise waxaan u baahan doonaa xoojin?
Waxyeellooyinka iyo xaaladaha gaarka ah
Miyaan ka heli karaa COVID-19 tallaalka COVID-19?
Maya. Tallaalka kama qaadan kartid COVID-19.
Tallaallada ama tallaallada COVID-19 ee la oggolaaday midkoodna kuma jiro fayraska nool ee sababa COVID. Taas macnaheedu waa in tallaalka COVID-19 uusan kugu bukoon karin COVID-19.
Ma jiraan waxyeellooyin?
Ma heli karaa tallaalka COVID-19 haddii aan uur leeyahay ama aan qorsheynayo in aan uur yeesho?
Haddii aad uur leedahay, naas -nuujinaysid, ama aad qorsheynaysid inaad uuraysato, Kulliyadda Dhakhaatiirta dhalmada ee Maraykanka (ACOG) waxay bixisaa jawaabaha su'aalaha badanaa la isweydiiyo wuxuuna si xoog leh kugula talinayaa inaad kala hadasho bixiyahaaga daryeelka caafimaadka wax ku saabsan haddii tallaalku adiga kugu habboon yahay, iyada oo ku saleysan halista aad u leedahay inaad la kulanto COVID-19.
Tallaalka Johnson & Johnson ayaa la joojiyay muddo 11 maalmood ah Abriil 2021 sababo la xiriira warbixinno dhif ah, laakiin saameyn daran oo xinjiro dhiig ah oo leh xinjiro hoose (thrombosis with thrombocytopenia syndrome, ama TTS) ee haweenka ka yar 50 sano. , oo ku dhaca qiyaas ahaan 7 halkii 1 milyan oo haween ah oo la tallaalay oo u dhexeeya 18 iyo 49 sano jir. Dumarka 50 sano iyo ka weyn iyo ragga da 'walba leh, saameyntani waa mid aad dhif u ah. Walaaca iyo hakadku wuxuu la xiriiray oo keliya tallaalka J&J, ma aha tallaallada Moderna ama Pfizer BioNTech. Dib -u -fiirinta dhammaan xogta la hayo, faa'iidooyinka la og yahay iyo kuwa suurtagalka ah ee tallaalka J&J waxay ka badan yihiin halista la og yahay iyo suurtagalka ah ee loogu talagalay kuwa lagu taliyey inay helaan.
Haddii aad hesho tallaalka J&J, ama aad dhowaan heshay, u fiirso astaamaha suurtagalka ah ee xinjirowga dhiigga ee leh platelet hooseeya muddo saddex toddobaad ah ka dib qaadashada tallaalka isla markaana raadso daryeel caafimaad isla markaaba haddii aad midkood ku soo baxdid. Xusuusnow, waa caadi in la yeesho astaamo dhexdhexaad ilaa dhexdhexaad ah, oo ay ku jiraan qandho, madax xanuun, daal, iyo kalagoys / muruq xanuun, inta lagu jiro usbuuca ugu horeeya kadib helitaanka tallaal kasta oo COVID-19 ah. Haddii aad qabtid wax su'aalo ah haba yaraatee, wac dhakhtarkaaga, kalkaalisada caafimaadka, ama rugta caafimaadka.
Carruurta ma la tallaali karaa? Miyuu myocarditis khatar ahayn?
Waxaa laga yaabaa inaad maqashay wax ku saabsan tiro yar oo qaan-gaar ah iyo dhallinyaro qaan-gaar ah oo la kulmay kiisas fudud oo caabuq wadne ah (oo loo yaqaanno myocarditis) ka dib markii la qaatay tallaalka COVID-19. Intooda badan ayaa iskood u bogsaday ama daweyn yar iyo nasasho. Iyadoo lagu saleynayo caddeymihii ugu dambeeyay, myocarditis wuxuu u muuqdaa inuu yahay waxyeellooyin aad u dhif ah. CDC, oo ay weheliso Akadeemiyada Maraykanka ee Dhakhaatiirta Carruurta iyo kooxaha kale ee caafimaadka ee waaweyn, waxay sii wadaa inay ku taliso tallaalka COVID-19 dadka 12 sano iyo ka weyn.
Wax badan ka baro myocarditis iyo tallaalka COVID dhaqtarka carruurta ➜
Ka warran dadka leh arrimo kale oo halis ah, xasaasiyad, ama welwel caafimaad?
Fadlan eeg CDC -da talooyin loogu talagalay dadka leh xaalado caafimaad ama xaalado nololeed oo gaar ah, sida dadka waaweyn, dadka xasaasiyadda qaba, iyo shaqaalaha meelaha qaarkood.
Tallaalku ma dhaawacmi doonaa ama beddeli doonaa DNA-dayga?
Maya, tani macquul maahan. Tallaalada Messenger RNA (mRNA) sida Pfizer iyo Moderna waligood ma galaan unugyada unugyada, halkaasoo ay ku nool yihiin DNA, maadadaada hidde.
Tallaalku si dhakhso leh ayuu u jajabiyaa markuu soo galo unugga wuxuuna gaarsiiyaa “farriinta” loo baahan yahay mashiinnada unugga.
Qiyaas tallaalku inuu jidhkaaga ku soo galayo oo leh buug tilmaam ah. Nidaamkaaga difaaca ayaa xafidaya buug-gacmeedka si uu ula dagaallamo COVID-19. Ma beddeli karto DNA-gaaga.
Tallaalka COVID-19 ma dhaliyaa dhalmo la'aan?
Maya. Tani waa khuraafaad ay internetka ku faafiyeen ilo aan cilmi ahayn. Ma jiraan wax caddeyn ah oo sheegaya in tallaallada COVID-19 ay dhaliyaan dhalmo la'aan.
Maxaan ka ogaadaa tallaalada Pfizer BioNTech iyo Moderna COVID-19?
Moderna iyo Pfizer BioNTech waxay u baahan yihiin laba qiyaasood si ay u bixiyaan difaac buuxa, halkii ay ka ahaan lahaayeen J&J.
Teknolojiyadda loo adeegsaday in lagu hormariyo labada tallaal ee ugu horreeya COVID-19 ee loo oggolaaday in laga isticmaalo Mareykanka, laga bilaabo Moderna iyo Pfizer, ma ahan kuwo cusub. Waxaa la darsay oo loo adeegsaday tobanaan sano cilmi baaris caafimaad oo kale. Waa run in tallaallada COVID si dhakhso leh loo soo saaray marka loo eego tallaallada kale ee la soo dhaafay. Laakiin si taxaddar leh ayaa loogu tijaabiyay tijaabooyin caafimaad oo ku lug leh tobanaan kun oo qof. Ma jirin welwel amni oo halis ah. Natiijooyinka imtixaanka ayaa dib loo eegay waxaana ansixiyay dhowr guddi oo madax -bannaan oo khubaro ah. Intaa waxaa dheer, Tallaalka Pfizer si rasmi ah ayaa FDA loo oggolaaday.
Dadka qaarkood waxay la kulmaan waxyeelo fudud ama dhexdhexaad ah; dadka kale ma. Saameynaha ugu caansan waa xanuun iyo barar gacanta oo ah meeshii lagaa siiyay tallaalka. Waxaad sidoo kale yeelan kartaa qandho, dhaxan, daal, iyo madax xanuun.
Dhibaatooyinkan soo raaca waa astaamo caadi ah oo muujinaya in jirkaagu dhisayo difaac. Micnaheedu waa tallaalku shaqadiisa ayuu gudanayaa. Waa ma macnaheedu waa inaad leedahay COVID-19. Haddii dhibaatooyinka soo raaca aysan kaa bixin dhowr maalmood gudahood, ama aad leedahay astaamo ka sii daran, wac dhakhtarkaaga.
Maxaan ka ogaadaa tallaalka Johnson & Johnson (J&J)?
Tallaalka Johnson & Johnson (J&J) wuxuu u baahan yahay hal qiyaas si uu u helo difaac buuxa COVID-19. Marka la barbardhigo, tallaalada Moderna iyo Pfizer BioNTech waxay u baahan yihiin laba qiyaasood si ay u helaan difaac buuxa.
Tallaalka J&J waxaa la joojiyay 11 maalmood Abriil 2021 sababtuna waa warbixinno dhif ah, laakiin saamayn daran oo xinjiro dhiig leh oo leh xinjiro hoose (thrombosis with thrombocytopenia syndrome, ama TTS) dumarka ka yar 50 sano. qiyaas ahaan qiyaastii 7 halkii 1 milyan oo haween ah oo la tallaalay oo u dhexeeya 18 iyo 49 sano jir. Dumarka 50 sano iyo ka weyn iyo ragga da 'walba leh, saameyntani waa mid aad dhif u ah.
Haddii aad ka walaacsan tahay tallaalka J&J, Moderna iyo Pfizer BioNTech COVID-19 ayaa la heli karaa. Walaaca iyo hakadka wuxuu kaliya la xiriiray tallaalka J&J, ma aha tallaallada Moderna ama Pfizer BioNTech. Farqiga ugu weyn ayaa ah in Moderna iyo Pfizer BioNTech ay u baahan yihiin laba qiyaasood si ay u helaan difaac buuxa, halkii ay ka ahaan lahaayeen hal qiyaas J&J.
Dib -u -fiirinta dhammaan xogta la hayo, faa'iidooyinka la og yahay iyo kuwa suurtagalka ah ee tallaalka J&J waxay ka badan yihiin halista la og yahay iyo suurtagalka ah ee loogu talagalay kuwa lagu taliyey inay helaan. Waaxda Caafimaadka ee Gobolka Washington waxay leedahay dib u bilaabay isticmaalka tallaalka Johnson & Johnson (J&J) gobolka oo dhan qof kasta oo jira 18 sano iyo ka weyn, soo socda hagida FDA iyo CDC.
Immisa ayey ku kacaysaa?
Waxba. Dawladda dhexe ayaa ka daboolaysa tallaalka free dhammaan dadka ku nool Mareykanka.
Waa inaan lagaa qaadin wax kharash ah oo jeebkaaga ka baxsan. Waa inaadan biil ka helin daryeelahaaga ama meesha aad tallaalka ka qaadatay.
Bixiyeyaasha qaarkood ayaa laga yaabaa inay biil ku soo dallacaan qorshahaaga caymiska caafimaadka “khidmadda maamulka” tallaalka ay ku siinayaan. Tani way ka duwan tahay kharashka tallaalka laftiisa. Qorshayaasha caafimaadka, sida CHPW, waxay dabooli doonaan kharashka wixii khidmad maamul ah.
Ma heli karaa macluumaadka tallaalka luuqadeyda?
Haa! CDC waxay leedahay a bogga macluumaadka macluumaadka tallaalka inaad ku arki karto luqado kale. Kaliya guji tabka "Luqadaha".
Ma heli karaa tallaalka haddii aanan lahayn caymis?
Haa. Dhammaan dadka deggan 12 sano iyo ka weyn ayaa xaq u leh tallaalka, iyadoon loo eegin xaaladda socdaalka ama xaaladda caymiska caafimaadka. Tallaalku waa BILAASH $ 0.
Waa inaan lagaa qaadin kharashyada jeebka ka baxsan, ama aadan biil ka helin bixiyahaaga ama xarunta tallaalka. Tani waxay khusaysaa dadka aan caymis lahayn, iyo sidoo kale kuwa leh caymis gaar ah, haysta Apple Health (Medicaid), ama haysta Medicare.
Haddii aad hesho adeegyo kale inta aad u joogto bixiyahaaga si aad u tallaasho, waxaa laga yaabaa inaad hesho biil booqashada xafiiska. Si aad tan uga hortagto, waxaad horay u weydiin kartaa adeeg bixiyahaaga qiimaha.
Booqo Waaxda Caafimaadka WA si aad u hesho faahfaahin ku saabsan biilka tallaalka COVID ➜
Helitaanka tallaalku ma saamayn doonaa xaalkayga socdaalka?
Maya. Uma baahnid lambarka soshal sekuuritiga, ama dukumiintiyo kale oo wata sharcigaaga socdaalka, si aad u hesho tallaalka. Bixiyeyaasha tallaalka qaarkood ayaa laga yaabaa inay ku weydiistaan ​​lambarka dammaanadda bulshada, laakiin maahan inaad mid siiso.
Baaritaanka, daaweynta, iyo tallaalka cudurka coronavirus laguma xisaabin doono imtixaan dadweyne. Adiga iyo xubnaha qoyskaaga waxaad heli kartaan daryeelka aad u baahan tihiin cabsi la'aan.
Wax dheeraad ah oo ku saabsan COVID iyo xaaladda socdaalka ka baro Mashruuca Caddaaladda ee Waqooyi -galbeed ➜
Wax dheeraad ah oo ku saabsan tallaalka COVID iyo xaaladda socdaalka ka baro Waaxda Caafimaadka WA ➜
Ilaha: CDC, FDA, CNN, Akademiyada Maraykanka ee Dhakhaatiirta Qoyska, American Academy of Pediatrics, American College of Obstetricians and Gynecologists, EthnoMed, Greater Than COVID, Ururka Qaranka ee Xarumaha Caafimaadka Bulshada, Johns Hopkins Medicine, Northwest Justice Justice, Waaxda WA Caafimaadka, Jawaabta Coronavirus ee Gobolka WA, Daawada Yale
Nap Maalin ah ayaa Dhakhtarka Ka fogaan kara
Dad badan oo Mareykan ah ma helaan hurdo ku filan tanina waxay gacan ka geysan kartaa arrimo caafimaad oo dhowr ah. Nasasho yar inta lagu jiro maalintii waxay ka caawin kartaa jirkaaga inuu dib isu soo celiyo wuxuuna kobciyaa caafimaadka maskaxda iyo wadnaha. Hurdo yar oo 20 daqiiqo ah waxay leedahay faa'iidooyin caafimaad oo kaladuwan - laga bilaabo niyadda oo hagaagtay, iyo feejignaan wanaagsan iyo shaqada xusuusta. Dhaqamada qaar, hurdada ayaa xitaa loo qoondeeyaa daaweyn caafimaad oo ay dhakhaatiirtu u sameeyaan!
Haddii hurdo kugu dhacdo qaado talaabooyin aad ku wanaajineyso tayada hurdadaada.
Riix halkan si loo qorsheeyo dib u eegista qorshaha.
Khadka TALADA NURSIGA
(TTY Relay: Garaac 711)
1111 Wadada Saddexaad
8: 00 AMA 8: 00 pm
Toddoba Maalmood Toddobaadkii
LINKS DEGDEG AH
Foomamka & Qalabka
MA Laba Qorshe (HMO SNP)
La kulan Khabiir
Isbarbar dhig Qorshayaasha
Sidee loo diiwaan geliyaa?
Taariikhda Ugu Dambeysa ee Cusboonaysiinta: Oktoobar 1, 2021
Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington waa qorshe HMO oo leh qandaraas Medicare. Diiwaangelinta Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Qorshaha Faa'idada Medicare Washington waxay ku xiran tahay cusboonaysiinta heshiiska. Si aad isaga diiwaangeliso Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Qorshaha Faa'idada Medicare ee Washington, waa inaad u qalanto inaad hesho Medicare Qaybta A iyo Qaybta B oo aad ku noolaato aagga adeegga (Adams, Benton, Chelan, Clallam, Clark, Cowlitz, Douglas, Franklin, Grant, Gray's Harbor, Jefferson, King, Kitsap, Lewis, Mason, Okanogan, Pacific, Pierce, Skagit, Snohomish, Spokane, Stevens, Thurston, Wahkiakum, Walla Walla, Whatcom, iyo Yakima ee Gobolka Washington). Kani ma aha sifeynta dhammaystiran ee faa'iidooyinka, fadlan nagala soo xiriir wixii macluumaad dheeraad ah.
Xaddidaadaha, lacag-bixinta, iyo xaddidaadda ayaa laga yaabaa inay khuseeyaan.
Waa inaad sii wadataa inaad bixiso khidmaddaada Medicare Qaybta B.
Español || Tiếng Việt | | Tagalog | Pусский | العربية | Kreyòl | Français | Polski | Português | Italiano | Deutsch || فارسی | Luqadaha kale…
Waxaad u baahan doontaa akhristaha Adobe si aad uga furto PDF-yada goobta. Ku soo dejiso nooca bilaashka ah Adobe Reader.
* Ogeysiiskayaga Kala-sooc la'aanta
Xuquuqda daabacaadda © 2021 Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington
☏ SU'AALO MA LEH?
Hel jawaabo dhab ah
dadka dhabta ah
E-mail: [emailka waa la ilaaliyay]